Fikaovan'ny PET ho an'ny indostrian'ny fonosana Bundle China Manufacturer
Dongguan Yalan Packing Materials Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:21% - 30% Certs:ISO9001 Description:Fametahana maitso,Fitaovana fametahana poleta,Fitaovana fametahana biby
Home > Products > Strapping > Pet Strapping > Fikaovan&#39;ny PET ho an&#39;ny indostrian&#39;ny fonosana Bundle
Ity fametahana PET ity dia natao ho an'ny jiro ho an'ny asa fanaovan-jiro, Palletising sy mifehy. Izy io dia afaka manohana isan-karazany sakany, matevina, ary polymer variations. azo antoka kokoa azo antoka kokoa noho ny famatorana vy sy ny lanja maivana 22 noho ny famatorana vy. Izy io dia mety amin'ny milina, semi-auto machine na fampiasana tanana.
Manana tsipika famokarana hafahafa 6 isika, ny famoahana isan'andro dia 25 taonina, efa nafarana any amin'ny firenena 33 mahery.
Ny kalitao tsara & ny serivisy tsara & ny vidiny tsara, araky ny hahitanao ny antony isafidiananao anay!
Olana amin'ny vokatra:
☆ Manokana manokana amin'ny kasety adhesive izahay ary manenjana ny sary p mametaka mandritra ny 20 taona mahery.
☆ USD 35 MILLION fiodinana tamin'ny herintaona
☆ Iray amin'ireo mpanamboatra horonantsary mivelatra lehibe indrindra any Chine izahay, miaraka amin'ny lozisialy 3Multi haingam-pandeha haingam-pandeha LLDPE mivelatra amin'ny tsipika famokarana horonantsary.
☆ Manana politikam- pampianarana henjika henjana izahay. Mampiasa ny teknolojia efa mandroso indrindra izahay hamerenana ireo sisa tavela ary koa hifehezana ny fiantraikany rehetra amin'ny tontolo iainana.
Fametahana biby maitso
Fametahana maitso Fitaovana fametahana poleta Fitaovana fametahana biby Fametahana biby maitso Fametahana matevina Fametahana biby Fametahana vy Fametahana plastika